Quick Hand သည် အပြာရောင် ကော်လာ စုဆောင်းမှု ပလက်ဖောင်း ကိုစတင် ခဲ့သည်-Quick Recruitment – Pandaily
Jan 26, 2022, 19:35ညနေ 2022/01/26 23:05:52 Pandaily
ပြည်တွင်း ထိပ်တန်း အကြောင်းအရာ အသိုင်းအဝ ို င်းသည် မကြာသေးမီက စတင် ခဲ့သည်၎င်း၏ ပလက်ဖောင်း ပေါ်တွင် Quick Recruitment ဟုခေါ်သော တိုက်ရိုက် စုဆောင်းမှု အင်္ဂါရပ်.
ရိုးရာ စုဆောင်း သူများနှင့် မတူဘဲ ဤ စုဆောင်းမှု ပုံစံသည် အသုံးပြု သူများအား အလုပ် လျှောက်လွှာ များကို ဖြည့်စွက် ရန် ကိုယ်ရေးရာဇဝင် အကျဉ်း များ ပေးပို့ ရန်မလိုအပ်ပါ။ အဲဒီ အစား သူတို့ လုပ် ဖို့လိုအပ် တာက သူတို့ရဲ့ ဆက် သွ ယ်ရန် အချက်အလက်များကို ချန် ထား ရန်ဖြစ်သည်။ ဤ ရိုးရှင်းသော လုပ်ဆောင်မှု သည် အပြာရောင် ကော်လာ လုပ်သားများ အတွက် ဖြစ်နိုင် သမျှ အခွင့်အလမ်း များကို ရှာဖွေနေ သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ အတွင်း လူများ အဆိုအရ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှ ၀ န်ထမ်း ခေါ်ယူ မှု သည်၎င်း၏ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု စနစ်ကို စူးစမ်း လေ့လာခြင်း ဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့် အပြာရောင် ကော်လာ အသုံးပြုသူ အမြောက်အ များရှိ နေခြင်းကြောင့် လုံလောက်သော ရောင်း လိုအား နှင့် ၀ ယ် လို အားကို ပေးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများ နှင့်တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ခြင်း များအကြား ယုံကြည် မှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးနှင့် စစ်မှန်သော အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ပေါင်းစပ်။ ဤ မော်ဒယ်၏ အလုပ်အကိုင် မှ အောင်မြင်သော အလုပ် သို့ ပြောင်းလဲခြင်း နှုန်းသည် မျှော်မှန်း ထားသည် ထက်များစွာ ပိုမိုမြင့်မားသည်။
လတ်တလော အချက်အလက်များအရ တရုတ်နိုင်ငံ ၏ဒုတိယ နှင့်တတိယ အဆင့် စက်မှု လုပ်ငန်းများတွင် အပြာရောင် ကော်လာ လုပ်သား ဦး ရေသည် ၄ ၂၆ သန်း ခန့်ရှိသည်။ အဖြူ ကော်လာ လုပ်သား သန်း ၁၈၀ နှင့် ရွှေ ကော်လာ ၁၂. ၄ သန်း တို့ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက အပြာရောင် ကော်လာ လုပ်သားများ ၏လူ ဦး ရေမှာ များစွာ ကြီးမားသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Migu, Tencent, Fast Hand သည် ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် ထုတ်လွှင့် ခွင့် ကိုရရှိ ခဲ့သည်
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်သမား အေဂျင်စီ များနှင့်အခြား စုဆောင်း သူများအတွက် သင်သည် “ အမြန် စုဆောင်းမှု” ကိုရှာဖွေ ပြီး သင် ၏စီးပွားရေး လိုင် စ င်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ၀ န်ဆောင်မှု လိုင်စင် နှင့်အခြား သတင်းအချက်အလက် များကဲ့သို့သော လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ကိုတင်ပြ နေ သမျှ ကာလ ပတ်လုံး သင်သည် ပလက်ဖောင်း အသစ် ၏ အသိအမှတ်ပြု အသုံးပြုသူ ဖြစ်လာ နိုင်သည်။ နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် အပြီးတွင် လူများသည် အလုပ် ရှာ နေ သည့်အချိန် များ မကြာခဏ ရှိ တတ် ပြီး ကုမ္ပဏီ များက စုဆောင်း နေကြသည်။ Kaishou သည်ဤ နယ်ပယ် တွင်ပိုမို လုပ်ဆောင် မှုရှိ/မရှိ ဆိုသည်မှာ အငြင်းပွား ဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။
Industry Sep 28 စက်တင်ဘာ 29, 2021
Jin Bing ကို CFO အဖြစ်ခန့်အပ် ပြီး စီအီးအို Cheng Yixiao သို့ သတင်းပို့ ပါ
ပြည်တွင်း ထိပ်တန်း အကြောင်းအရာ အသိုင်းအဝ ို င်းသည် Jin Bing အား ကုမ္ပဏီ ၏ဘဏ္ financial ာရေး အရာရှိ ချုပ် အဖြစ် တနင်္လာနေ့တွင် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။